China Polymer Polyol LPOP-3628 ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ya Longhua
Polymer polyol bụ polyol graft nke dabere na Styrene na acrylonitrile. Emebere ya maka nrụpụta ụfụfụ ngwaahịa slab na -agbanwe agbanwe iji welie ike ibu ibu.
LPOP 3628 emebere nke ọma maka imepụta ụfụfụ na -agbanwe agbanwe. Enwere ike iji ya gwakọta ya na polyether polyol na -arụ ọrụ nke ọma maka imepụta ụfụfụ na -ebu ibu. Ụfụfụ a na -emepụta na ngwakọta ndị dị otú ahụ na -egosi ihe na -abawanye ike.
Viscosity (mPa • s ， 25 ℃) ≤ 00 2600
Ọdịnaya siri ike (wt%) ： 22.0-26.0
Mmiri (wt%) ≤ .00.08
Ọdịdị: emulsion ọcha
Ngwaahịa ndị a, nwere ezigbo mmeghachi omume, nwere ike imeghachi omume na ọnụọgụ nke isocyanates iji nye ngwaahịa urehane mmeghachi omume (RIM). Ngwa ngwa gwọọ oyi na ngwaahịa na-agbanwe agbanwe nke RIM urethane, dị ka oche ụgbọ ala na ụzọ njem, wiil ndị na-anya ụgbọ ala, bọọdụ ịkwọ ụgbọ ala na ihe ndị ọzọ, na arịa ụlọ, nwere ezigbo nkwụsi ike, nnabata mkpakọ na mmetụta ntụsara ahụ.
Nke gara aga: Polymer Polyol LPOP-2025
Osote: Polymer Polyol LPOP-3630
Pop Maka ụfụfụ ụfụfụ